Crunchyroll – Networks – MMANIME
Noblesse Noble တွေရဲ့ ကာကွယ်သူ Noblesse အမည်ကိုခံယူထားတဲ့ Raizel က နှစ်ပေါင်း ၈၂၀ အိပ်ပျော်ရာမှနိုးထလာခဲ့ရာမှာ မရင်းနှီးတဲ့ အဆောက်အအုံတစ်ခုထဲရောက်နေတာသိလိုက်ရပါတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့သူဟာ သူ့ရဲ့ အစေခံ Frankenstein နဲ့တွေ့ဆုံပြီး ကမ္ဘာ ကြီးဟာ သူအရင်နေခဲ့ ကမ္ဘာကြီး နဲ့မတူဘဲ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေကြောင်း သိလိုက်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာပဲ လူသားတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ noble တွေကို သုတ်သင်ပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ကြီးစိုးဖို့ ကြံစည်နေပါတယ်။ စွမ်းအားကြီးတဲ့ noble တွေကို အနိုင်ရနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာဖြစ်မလဲ…… Raizel ကရော ဘာကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၈၂၀ ကျော် အိပ်ပျော်သွားရတာလဲ……… Noble နဲ့လူသားတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းက ဘယ်လိုဆက်စပ်နေသလဲ…… စွမ်းအားအကြီးဆုံး noble လို့ အသတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ Noblesse ဟာ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာ ဒီ anime ထဲမှာ သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် စာကြွင်း - Noble ...
Burn the Witch Review London မြို့ရဲ့ သေဆုံးမှု ၇၂%ဟာ နဂါး‌ေတွကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် နဂါးတွေကို သာမန်လူတွေကမမြင်နိုင်ပါဘူး ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူအချိလူနည်းစုကကတော့နဂါးတွေကိုတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ် Reverse london (harry potter ထဲလိုမှော်ကမ္ဘာဖြစ်‌ေလာက်ပါတယ်)တွင်နေထိုင်သူတွေကတော့ နဂါးတွေကို မြင်ရပါတယ် ထိုသူတွေထဲမှာ အရည်အချင်းကိုက်ညီသောမှောဆရာသို့မဟုတ် စုန်းမဘွဲ့ရရှိသူများသာ နဂါးများနှင့်တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ် ဤဇာတ်လမ်း ၏အဓိက ဇာတ်ကောင်များကတော့ စုန်းမ အတွဲများဖြစ်ကြတဲ့Noel Niihashi နှင့် Ninny Spangcole တို့ဖြစ်ကြပါတယ် သူတို့က Wing Bind (WB)နဂါးနဲ့ ပတ်သတ်သော ကိစ္စများဖြေရှင်းရသောဠာန ရဲ့ ကာကွယ်ရေး အေးဂျင့်တွေဖြစ်ကြပါတယ် သူတို့ ဟာလူတွေအစား london မြို့တော် အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရှိသော နဂါးကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းရပါတယ် Episode 1 Episode2Episode 3
Anime-Gataris Overview After dreaming about an anime she used to watch asachild, Minoa Asagaya could not forgetaparticularly memorable scene. However, despite her best efforts, she cannot recall the name of the show. Due to this, Minoa asks for help from her fellow classmates at Sakaneko High School. Her conversation is overheard by Arisu Kamiigusa, the most popular and ...
Oda Cinnamon Nobunaga Oda Cinnamon Nobunaga Episodes: 12 Status: Finished Airing Aired: Jan 11, 2020 to Mar 28, 2020 Duration: 23 min. per ep. Rating: PG-13 - Teens 13 or older Genre Comedy , Historical, Seinen ,Slice of life Review oda nobunaga လို့ခေါ်တဲ့ ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက် သူသေဆုံးခဲ့တဲ့နေရာ Honnoji ဘုရားကျောင်းမှာပေါ့ သူမသေခင် ဆုတောင်းခဲ့တာက ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ဝင်စားရပါလို၏အဲ့လိုနဲ့နောက်ဘဝမှာ ခေတ်မှီတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာCinnamon ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခွေးဘဝ ရခဲ့တယ် (Hum?) သူပဲခွေးဖြစ်တာလားဆိုတော့ မဟုပ်ဘူး သူ့အပေါင်းအဖော်တွေလည်း ခွေးဖြစ်ကြတာ သူနဲ့ သူ့အပေါင်းအဖော်တို့က ခွေးဘဝမှာ ပြန်ဆုံကြပြီး ဘာတွေဆက်လုပ်မှာ လဲ ဪ..သူတို့ဆုံတဲ့နေရာက ခွေးပန်းခြံမှာတဲ့ Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode ...
To Be Hero To be hero Episodes : 12 Runtime : 11 min MAL Rating : 7.02 Age : RatingPG-13 - Teens 13 or older Producers : Emon, studio LAN Genre : comedy,supernatural Review ===================================== ဒီAnimeလေးမှာတော့ Uncle လို့ခေါ်တဲ့လူကြီးဟာ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ချောမောတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဖခင်တယောက်အနေနဲ့တေ့ာတာဝန်မကျေခဲ့ပါဘူး။ သူဟာသူ့မိန်းမနဲ့ကွာရှင်းပြီးကတည်းက အိမ်သာထိုင်ခုံ designer အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကာ သမီးဖြစ်သူ Min-chanနဲ့အတူတူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သမီးဖြစ်သူ Min-Chan နဲ့အတူတူ အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ Uncleဟာအိမ်သာတက်နေတုန်း မိလ္လာပိုက်ထဲကိုဆွဲချခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့သူဟာ ဘယ်နေရာမှန်းမသိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီး လူသန်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အရေးတကြီးတာဝန်တစ်ခုကိုပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတာဝန်ကတော့ သူဟာ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ...
Keep Your Hands Off Eizouken! Genres: Adventure, Comedy, School, Seinen Source: Manga Duration: 25 min. per ep. Rating: PG-13 - Teens 13 or older Translated....... Takeya Yuki Encoded.......Oscar Myo Min ******************************** ဒီကားလေးကတော့ Animeတွေကို မယုံနိုင်လောက်တဲ့ ကမ်ဘာတခု တကယ်ဖြစ်လာဖို့ ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ကောင်မလေး၃ယောက်အကြောင်းကို ဖော်ကြူးထားတာပါ....သူတို့ကတော့... ကာတွန်းတွေပုံတွေဆွဲရတာကြိုက်ပီး animeတွေကိုလဲဖန်တီးချင်တဲ့ Midori Asakusaရယ်...... သူ့သူငယ်ချင်းအတွက် ငွေရမယ်ဆို ဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်မဲ့ဂျစ်ကန်ကန်နဲ့ကောင်မလေး Sayaka Kanamoriရယ်.....နောက်တယောက်ကတော့.. modelအလုပ်ထက် animeတွေကိုနှစ်သပ်ပီးပုံဆွဲရတာကိုကြိုက်တဲ့ Tsubame Misuzaki ရယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်... သူတို့၃ယောက်သားတတ်တတ်ကြွကြွနဲ့ဘယ်လိုတွေအလွဲလွဲချော်ချော်တွေနဲ့ ဘယ်လိုတွေဖန်တီးကြမလဲဆိုတာတော့ ဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ပေးပါကြနော်... ဒီanimeဟာ 2016ထွက် Eizoken ni wa Te o Dasu na!ဆိုတဲ့ Mangaကိုanimeအနေနဲ့ထွက်ရှိလာတာပါ... Ongoing Series ထဲမွာ 12ပိုင်းနဲ့ (Complete) ဖြစ်သွားပါပြီဗျ... ဒီanimeလေးမှာထူးခြားတာက ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းမှာ Warner brosဝင်ကိုင်ထားတာပါ ဟုတ်ပါတယ်.... မိတ်ဆွေတို့စိတ်ထဲထင်တဲ့ဟောလိးဝုဒ်ကားကောင်းတွေကားတွန်းကားတွေMen of ...
Dr. Stone Dr. Stone (Season 1) Mmsub- စဆုံးး Total ep-24 Genre: Sci fi, adventurer, Shounen Animation Studio: TMS entertainment ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း- (Crd) Senku နဲ့ Taiju ဟာငယ်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ Senku ဟာသိပ္ပံပညာကိုအလွန်ဝါသနာပါပြီး ဉာဏ်အရမ်းကောင်းတဲ့လူငယ်တယောက်ပါ။ Taiju ကတော့သာမန်လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီး Senku လိုတော့ဉာဏ်မကောင်းပါဘူး။ တနေ့မှာ Taiju ဟာငယ်ငယ်ထဲက တဖက်သတ်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေးကိုဖွင့်ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ဖွင့်ပြောဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာ ရုတ်တရက် ထူးဆန်းတဲ့အလင်းရောင်တခုကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှ လူသားအားလုံးကျောက်ရုပ်တွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ် နောက်နှစ်ပေါင်းသုံးထောင်ကျော်ခန့်အကြာမှာ Taiju ဟာနိုးထလာခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Senku ကသူထက် နှစ်ဝက်ခန့်ကြိုပြီးစောနိုးနေတာတွေ့ရတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ပေါင်းပြီး သူတို့ဘယ်လိုနိုးထခဲ့ ကြလဲ? အခြားနိုးထနေတဲ့လူတွေကောရှိဦးမလား? အခြားလူတွေကိုကော ဘယ်လိုနိုးထအောင်လုပ်ရမလဲ? ဆိုတာကို Senku ရဲ့သိပ္ပံဗဟုသုတတွေသုံးပြီး ကျောက်ရုပ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ Stone world ကြီးမှာ အသက်ရှင်ရုန်းကန်ကြရမှာကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ anime က sci-fi အမျိုးအစား ...